नेपालकी सन्नी लियोनी भन्दै भारतीय मिडियामा छाइन् अर्चना पनेरु, अर्चनाको रेट साढे चार करोड! - Gaule Media ::
Home/मनोरञ्जन/नेपालकी सन्नी लियोनी भन्दै भारतीय मिडियामा छाइन् अर्चना पनेरु, अर्चनाको रेट साढे चार करोड!
ramsharan२३ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०५:०७
काठमाडौँ । नग्न फोटो सुट गराएर एकाएक चर्चामा आएकी अर्चना पनेरु नेपालमा एक समय ब्यापक चर्चामा आइन् । सन्नी लियोनी बन्छु भन्दै अश्लिल फिल्म समेत खिचाउने बताउँदै हिँडेकी अर्चना केही फिल्म र म्यूजिक भिडियोमा खेले पनि पछिल्लो समय नेपाली बजारमा खासै नबिकेका बेला उनी भारतीय मिडियाको रोजाइ बन्न पुगेकी छिन् ।
भारतीय चर्चित अनलाइन दैनिक भास्करले अर्चनाका बारेमा स्टोरी छाप्दै नेपाली सन्नि लियोनको उपमा दिएको छ । दैनिक भास्करले अर्चनाको रेट साडे ४ करोड भएको उल्लेख गरेको छ । जहाँकी अर्चनालाई चलचित्र जिस्ममा डेब्यू गराउँदा निर्देशन राजु गिरीले निकै कम रेटमा काम गराएका थिए ।
पुर्व पोर्न स्टार सन्नी लियोनको नेपाली ट्याग आफै भिर्दै हिँडेकी अर्चना यो खबरले मक्ख भएपनि नेपाली कलाकारको गलत समाचार भारतीय मिडियाले बेलाबेलामा सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ ।